Qaansada, Aqoonsiga horumarinta webka ee ballan qaada | Laga soo bilaabo Linux
Qaansada, Aqoonsiga horumarinta webka ee ballan qaadaya
Xadgudub | | Aplicaciones
Mashruuca waxaa abuuray oo dayactiray saaxiibkeen qaaliga ah Adobe. Waxay hadda ku jirtaa nooc tijaabo ah. Waxaa ka mid ah astaamaha muuqda qaansada ku ka mid ah tafatirayaasha kale sida Qoraalka Sare o bluefish in tusaalooyin la soo qaato waa:
Markii aan tafatirnay dukumintiga HTML waxaan adeegsan karnaa toobiye CTRL + E si loo helo CSS-ta guriga ee aan tafatir ku sameyneyno xilligaas oo aan wax uga beddeleyno sida la doono.
Muuji ku noolaanshaha isbeddelada faylasha CSS ee biraawsarkayaga
Muuqaalkaani waa kan ugu cajaa'ibka badan waana midka aan aad u jeclaa. Waxaan ka arki karnaa isbeddelada aan ku sameyno CSS si otomaatig ah biraawsarka inta aan wax ka beddleyno, ma jiraan wax aan ku cusbooneysiin karno waqti kasta it.
Waqtigan xaadirka ah kaliya ayaa taageera Chrome y chromium. Waxaan idiinka tegayaa fiidiyowga kanaalka rasmiga ah ee Ingiriisiga oo leh macluumaad dheeri ah taasina waxay muujineysaa muuqaalka muuqaalka tooska ah (min 2:18):
Ku rakibida qaansooyinka Ubuntu 13.04 iyo waxyaabaha la midka ah
Waxaad kala soo bixi kartaa .deb ka Halkan Si loo rakibo waxaan u isticmaali karnaa GDebi, QAPT ama terminal.
dpkg -i brackets-sprint-28-LINUX32.deb
dpkg -i brackets-sprint-28-LINUX64.deb
Markii aan rakibay, waxa ugu horreeyay ee igu dhacay waxay ahayd inaysan soconayn, qaladkan ayaa soo muuqan doona marka lagu fulinayo terminal:
libudev.so.0: cannot open shared object file: No such file or directory
Waan googl galey oo wuxuu ku xalliyaa adoo ku qoraya cinwaanka:
iyo arrinta la xaliyay 😀.
Midda labaad "qalad" ayaa ah in Qaansooyinku aysan ii fureyn Chromium si aan u muujiyo faylka HTML (oo leh Google Chrome waa inaysan bixin qaladkan), bogga rasmiga ah ee qaybta su'aalaha la isweydiiyo waxaan ka helay dariiqa lagu hagaajin karo amarkan aad isugu midka ah (abuurista xiriir astaan ​​ah):
sudo ln -s /usr/bin/chromium-browser /usr/bin/google-chrome
Hadda haddii wax walba ay shaqeynayaan 100%. Farxad !!.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Qaansada, Aqoonsiga horumarinta webka ee ballan qaadaya
Xiiso leh Hada waan hoos u dhigayaa.
Shaki la'aan waa qalab aad u fiican. Waan kuu sheegayaa markaan tijaabiyo.
Aan dib u eego, waxaan hayaa dhowr mashruuc oo waxaan ku tijaabin karaa duruufo kala duwan ...
Waa hagaag, elav, waxaad ku sameyn kartaa isla sidaas Sublime adoo adeegsanaya qalabka 'LiveReload plugin', sidoo kale ku dheji Stylus, Jade iyo kafee, adoo ka tagaya konsol is-uruurinaya mar kasta oo aad keydiso feyl .styl ama .jade Taasi waa waxa aan sameynayo , ah iyo qaabka loo yaqaan 'nib' oo ah qaabka loo yaqaan 'styib stylus module' ayaa ah kaftan badan.
Waxa intaa ka sii badan, fiiri emmet's LiveStyle (livestyle.emmet.io) dabcan, haddii aadan horey u arkin, waa laga yaabaa inaad jeceshahay. Farxad
Ku jawaab frk7z
Waxa kale oo jira Bluegriffon, oo ah tifaftire web bilaash ah oo loogu talagalay Linux iyo windows, wuxuu taageeraa intaas oo dhan iyo in ka badan.
Bluegriffon miyuu runtii leeyahay dhammaan sifooyinkaas? Waxaan xasuustaa mar aan isku dayay, dalladaydu way xannibantay markii ay ahayd inaan bixiyo lacag dheeraad ah ama wax la mid ah.
Way ka fiican tahay isticmaalka Bluefish ... waxaa loo qorsheyn karaa ku dhowaad luuqad kasta, dhammaantood hal is-dhexgal buuxa ...
Bluefish waa barnaamij iskudhaf ah oo tifaftire ah POSIX HTML oo leh liisanka GPL, kaas oo ka dhigaya barnaamij bilaash ah.
Bluefish waxaa loogu talagalay loogu talagalay naqshadeeyayaasha websaydhada khibradda leh iyo barnaamijyada waxayna diiradda saarayaan tifaftiraha bogga firfircoon iyo isdhexgalka. Waxay awood u leedahay inay aqoonsato barnaamijyada kala duwan iyo luqadaha calaamadeynta.
Bluefish wuxuu ku shaqeeyaa qaar badan oo ka mid ah POSIX (Portable Operating System Interface) nidaamyada hawlgalka la jaan qaada sida Linux, FreeBSD, MacOS-X, OpenBSD, Solaris iyo Tru64
Waxay badanaa adeegsataa maktabadaha GTK iyo C posix. Nooca ugu dambeeyay ee la shaqeeyay GTK 1.0 ama 1.2 waa 0.7. Nooca hadda jira wuxuu u baahan yahay ugu yaraan nooca GTK ee 2.0 (ama ka sareeya), libpcre 3.0 (ama ka sareeya), libaspell 0.50 ama ka sareeya (ikhtiyaari) u higaadinta higgaadinta, iyo gnome-vfs (ikhtiyaari) faylasha fog.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in barnaamijku uusan si rasmi ah uga mid ahayn mashruuca Gnome, laakiin badanaa waxaa looga adeegsadaa jawiga noocaas ah.
Isticmaalayaasha sidoo kale waxay marin ka heli karaan ilaha internetka, sida serverka FTP ama tusayaasha WebDAV, si hufan ayagoo u maraya Gnome VFS, oo ah lakabka soo koobida nidaamka faylka.
Magaca iyo astaanta Bluefish (kalluunka buluugga ah) waxaa soo jeediyay Neil Millar, oo u soo jeediyay kooxda shaqada isla markiibana soo jiitay. Bluefish waa xayawaan (kalluun) ku dhex wareega iskuulo badan una dhow xeebta. Way iska cadahay in magaciisa uu ku baaqayo isdhexgal iyo wadaagis, himilooyin ku jira barnaamijyada bilaashka ah.
Waxaan isku dayay BlueFish. Waa run inay aad u wanaagsan tahay, laakiin anigu garan maayo, waxbaa ka dhiman. Waqtigan xaadirka ah waxaan ku tijaabinayaa Arch oo leh KDE duubku aniga iima shaqeynayo, waa inaan qabsadaa badhanka khariidadda baarka si aan u dhaadhaco. Wax badan ayey ku fiicnaatay dhammaystirka koodhka, laakiin sidaan markii hore idhi, waxbaa ka dhiman.
Tusaale ahaan, daawade bogga.
Way fiicantahay, haa, laakiin runtu waxay tahay inaan kusii sugnaado tifaftireyaasha beel ka dambeysa, Bluefish waxaa laga yaabaa inay leedahay horumariyeyaasheeda iyo sheekada oo dhan, laakiin waxa iga dhigaya inaan isticmaalo Sublime, tusaale ahaan, waa xaqiiqda fudud ee ay leedahay Qadar aad u weyn plugins iyo kheyraadka la heli karo, waa rasaas oo qalabkeeda caadiga ah ayaa kaa yaabi doona.
Ma beddeli lahayd heer sare? Haa haa, kaliya VIM xD
Laakiin heer sare ah ayaa tan loogu talagalay Linux?
Waxaan ka imid kubuntu 13.04, waxay i siisaa qaladka libudev, waxaan sameeyay isku xirka walina waa sidii hore 🙁
Si loo xaliyo (ugu yaraan taydu waa 64bits) tani waa khadka saxda ah:
William Limones Wells dijo
U fiirsasho wanaagsan, mahadsanid 😀
Jawaab Guillermo Limones Pozos
Ma aqaano, wax badan iima qancinayso ... laakiin weli ma aqaano.
Fikradda ah inaad ka madax banaanaato barnaamijkan Adobe waa mid xor ah oo mustaqbalka u furan weligiis ... ama sida farsamooyinka kale ee Adobe looga dhigo mid bilaash ah si aan ugu tijaabinno bilaash iyo goorta ay doonayaan inay u qaataan heer xirfadeed ay ka tagayaan qaybta bilaashka ah?
Ku jawaab equiman
Marka laga hadlayo Qaansooyinka, waxaan kuu dhaafayaa isbarbardhig aad u xiiso badan oo leh Sublime, oo uu sameeyay horumariye dhammaadka hore xirfad badan leh.
Sikastaba, waxaa haboon aqrinta: Qaamuusyada qoraalka Sare
Ku raaxeyso 😉
hadii qof ogyahay c ++ taasi way caawinaysaa waayo waa ku mahadsantahay bulshada tan linux.
Debian Wheezy laguma ordi karo, maxaa yeelay waxay u baahan tahay nooc ka sarreeya GLIBC kan aad haysato.
Ooh, waxaa jira nooc ka mid ah Linux waqti hore ka hor (dhowr bilood ka hor) oo aan ogaaday jiritaanka IDE-kan ma jiro wax nooc ah oo Linux ah oo waxaa iga hadhay inaan isticmaalo laakiin hadda waxaa jira nooc Linux ah , iyo sida laga soo xigtay elav, maya Waxay ku socotaa Wheezy waana distoorka aan haysto 🙁 haha, nasiib badan laakiin iskuma dayi doono maalin uun maxaa yeelay haddii ay leedahay astaamo wanaagsan
Waxaan ku jiray horumarinta webka mudo 3 sano ah khibradahayguna waa:
1aad Qoraal sare
Qorrax madoobaad 3aad
Kuwa kale waa daahir m… ..
Guud ahaan waxaan isticmaalaa Sublime, maadaama ay leedahay tiro aad u fara badan (midkood TWIG oo aan aad u isticmaalo). Haddii waxa aad raadineyso ay yihiin kuwo aan dhameystirneyn, ma jiraan wax la mid ah Eclipse ama netbeans.
Kiiskeyga qaladku wuxuu ahaa:
usr / lib / brackets / Brackets: qalad inta la rarayo maktabadaha la wadaago: libudev.so. 0: ma furi karo faylka walxaha la wadaago: Ma jiro faylka ama galka noocaas ah
Aniguna waxaan ku xaliyay anigoo dooranaya buugga u dhigma qaab-dhismeedkayga (Anibal sidoo kale wuxuu ku faallaynayaa) kuwa rakibaya nooca 64-bit waa inay doortaan tusaha x86_64-linux-gnu halkii laga dooran lahaa i386-linux-gnu, iyagoo ah sida soo socota:
Waxa kaliya ee aad sameysid waa inaad sameysid xiriir calaamadeysan oo ah libudev.so.1 isla galkaas oo leh magaca libudev.so.0
Ma aanan ogeyn in nooc ka mid ah Linux uu maqnaa, bilo ka hor ayaan isku dayay khamri, laakiin ma ahayn waayo-aragnimo lagu farxo. Furan si aad ugu mahadnaqdo bulshada taageerada siisay si loogu abuuro nooc loogu talagalay gacalkeena tux
Markaad faallooto, looma fulin karo kiiskeyga fariinta qaladka waxay ahayd:
Dhibaato yar ayaan ku qabaa qaansooyinka. Waxay leedahay waa in aan awood u yeesho khalad ka saarista fog ee Chrome waxaana ku xigaa su'aasha ah "Ma rabtaa inaad dib u bilowdo Chrome oo aad awood u siiso qalabeynta fog?" iyo badhanka [Dib u bilaabi Chrome]. Laakiin anigu waan siiyaa waxna ma qabto haba yaraatee, dib umana bilaabo, mana awoodo.
Waan ilaaway, waxaan hayaa Ubuntu 13.04 64bits. nooca Qaansaduna waa 29
Xiro Chrome oo qaansooyinku ha socodsiiyaan 🙂, ugu yaraan habkan hadday aniga aniga ila shaqeynaysay
Haa horey ayaan u sameeyay sida oo kale laakiin waxba. : S
Mahadsanid, waad ku mahadsan tahay taladaada. Dhibaato isku mid ah ayaa i haysata laakiin sixitaankaas aad tiraahdo aniga igama shaqeynayo Debian Wheezy, ma iga caawin kartaa taas, mahadsanid
IDE aad u fiican, dadka isticmaala Slackware waxaan uga tagayaa nidaamka lagu rakibo:
Sergio Antonio trujillo dijo
Waad ku mahadsantahay wax ku biirinta aan ku rakibey manjaro mana ku shaqeyneyn biraawsarka, laakiin mahadsanid isku xirnaanta astaamaha ayaan awooday inaan hagaajiyo.
Ku jawaab sergio antonio trujillo
duudduuban 93 dijo
xalkaagu ma shaqeynayo
barnaamijka wali ma bilaabmayo
Jawaab birta ah 93
Waad salaaman tahay! Ma rakibi karo qaansooyinka Huayra Linux, sideen ku sameeyaa? Way awoodaa
Waxaan ka soo dejiyey websaydhka rasmiga ah oo aan ku rakibey tilmaamaha ay degelkani na siinayaan, khaladka ayaa muuqday iyo xalka ay na siiyeen aniga ima uusan shaqeysan.
Sida aan awoodey inaan u rakibo oo aan u isticmaalo si sax ah dhibna aan ku qabin waxay ahayd iyadoo lagu daro keydka Console isla markaana lagu rakibo isla.
sudo add-apt-repository ppa: webupd8team / brackets
sudo apt-get qalabka lagu rakibo
Waxaan hayaa Kubuntu 15.04 oo leh plasma KDE 5 😉
Ku jawaab canorioss
[Tilmaan] Isku xirka qalabka MTP
Sida loo hagaajiyo waxqabadka kaarkaaga nVidia ee Linux